Dhamma Video - Search Media
10 Dhamma Radio
dhamma.tv All in One
All in One TV+Radio
10 Dhamma TV
( - _ ashin da daw in la ma o s sa sayardaw sayartaw shin ta tha u ya yar za ဆရာတော် ၏ 12View More
Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ]
- A - Arsaralinkarra - စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ အရှင်အာစာရလင်္ကာရ
- A - Ashin Agganyarna - Ashin Agganyana - အရှင်အဂ္ဂဥာဏ - [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ]
- A - Aung San sayardaw - အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသဒ္ဓမ္မကိတ္တိသာရ
- B - Bago Sayardaw Bhaddanta Tejosara – Tayzawtharra - ပဲခူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတေဇောသာရ
- B - Bamaw Sayardaw - ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
- B - Bodhitahtaung Bhaddanta Narada - ဗောဓိတစ်ထောင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနာရဒ
- B - PhaYarPhoo AhPhwae - ဘုရားဖူးအဖွဲ့
- B - Sayargyi U Ba Khin - တရားပြ ဆရာကြီးဦးဘခင်
- C - Chanmyay Sayardaw - ချမ်းမြေ့ရိပ်သာဆရာတော်
- D - ဘဒ္ဒန္တဓမ္မသာရမဟာထေရ် ( တောတိုက်ဓမ္မ၀ိသာရကျောင်းတိုက်ဆရာတော်)
- D - Dhamma - ဓမ္မ
- D - Dhamma Movies - ဓမ္မရုပ်ရှင်များ
- D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ
-- M- Mar Mar Aye - မာမာအေး
- G - gar htar taw myar - ဂါထာတော်များ
- G - General Buddhism Knowledge - ဗဟုသုတရဖွယ်အဖုံဖုံ
- G - S.N. Goenka - ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ဂါ
- G - Tabhawasasanar U Ghawthita - ကျမ်းပြုအကျော် ဘဒ္ဒန္တဃောသိတမဟာထေရ်
- H - History - သမိုင်း (မှတ်တမ်းများ)
-- Mogok မိုးကုတ် ဝိပဿနာနည်းဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်၍ ထူးခြားသော ဖြစ်ရပ်များ
- K - ကြာနီကန်ဆရာတော် - Kyar Ni Kan Sayardaw
- K - Ashin Kondalarbiwuntha - အရှင်ကုဏ္ဍလာဘိဝံသ (မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီး အရှင်ဇနကာဘိဝံသ၏ တပည့် မဟာဂန္ဓာရုံ နာယကချု�
- K - Bhaddanta Kumarra - ပိဋကဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာပေဌာန ကထိက
- K - Bhaddanta Kumarra - ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရ(ကျောက်ပန်းတောင်းဆရာတော်)
- K - First KaThitWine Sayardaw - မူလကသစ်ဝိုင် ဆရာတော်
- K - Khantee Sayardaw Bhaddanta Sujana - Thuzana - ဝန်းသိုမြို့ ခန္တီးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုဇန
- K - KonLon Sayardaw - ကုံလုံဆရာတော်ဘုရားကြီး
- K - U Kyaw Hein - ဦးဇင်းကိတ္တိသာရ
- L - Lalde Sayardaw - လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး
-- - DHAMMA TV CHANNELS
-- -DHAMMA RADIO CHANNELS
- M - Dr. Min Tin Mon - ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
- M - Maha Bodhi Myaing Sayardaw - မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဝနဝါသီ အရှင်ဉေယျဓမ္မသာမိမဟာ
- M - Majjhima gonyi sayardaw - မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောဝိဒ
- M - MaSoeYain Student - မစိုးရိမ်စာသင်သား
- M - Maung Htoung Myay Zin Sayardaw - မောင်းထောင်မြေဇင်းဆရာတော် (Video Only)
- M - Mingun sayardaw - မင်းကွန်း ဆရာတော်
- M - Moe Nyin Sayadaw - မိုးညှင်းဆရာတော်
- M - Mogok sayardaw - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တဝိမလမဟာထေရ်
- M - Munle (Monlae) Tawya - မုံလယ်တောရဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသံဝရ
- M - Myout Oo Sayartaw Ashin Waryar Mainda - အရှင်ဝါယာမိန္ဒ(မြောက်ဦးဆရာတော်)
- M - U Myint Lwin - ဦးမြင့်လွင်
- N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ
- N - Sidagu Sayardaw - Ashin Nyanissara - Nyarnitthara - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ
- N - U Narrada - မေဃ၀တီဆရာတော် ဦးနာရဒ
- N - U Nawindalinkarra - ဦးနာဂိန္ဒလင်္ကာရ
- O - U Oat Tan Tha - ဆရာတော်ဦးဥက္ကံသ
- O - U Oattamatharra - သန်လျင်ဘုရားကုန်းသဘာဝရိပ်သာ
- P - Dhamma Duta Ashin Pyin Nyar Zaw Ta - PinnyarJotta - ဓမ္မဒူတအရှင်ပညာဇောတ(တောင်စွန်းမြို့ )
- P - non stop maha pahtan ceremonies - အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ
- P - Pagoda - SayDePaHtoeMyar - CeTiPaHtoeMyar - စေတီပုထိုးများ
- P - Pakoku sayardaw - Dhammanupassana - Anicca Sayardaw - ပခုက္ကူဆရာတော်ဘုရားကြီး
- P - Phar Auk Tawya Sayardaw - ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်
- P - Phyu Sayardaw Bhaddanta Narapati - ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ
- P - Pyin Nyar Darna Myar - ပညာဒါနများ
- P - Sitagu One Star - Thitagu - ဘဒ္ဒန္တပညာနန္ဒ (သီတဂူကြယ်တစ်ပွင့်)
- P - U Ponnyarnanda - ဦးပုညာနန္ဒ
- R - Ashin Rajinda.Rajeinda - Rarzeinda - YaWaiNwe - အရှင်ရာဇိန္ဒ(ရဝေနွယ်…အင်းမ)
- R - Recorded Live - တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော ဗီဒီယိုများ
- S - Ashin Ardacsaransi U San Lwin - အရှင်အာဒိစ္စရံသီ (ဦးဆန်းလွင်)
- S - Ashin Chandadhika - ShweParrami Tawya - Sandardhika - အရှင်ဆန္ဒာဓိက(ရွှေပါရမီတောရ)
- S - Dhammaduta Ashin Chekinda - Saykeinda - ဓမ္မဒူတဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ
- S - Sar Taung Sayardaw - ဆားတောင်ဆရာတော်
- S - Sar War - ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက် စာဝါပို့ချချက်များ
-- B - Bokyaung - မဟာဓမ္မိကာရာမတိုက်၊ နံ့သာမြိုင် ဗိုလ်ကျောင်း၊
- S - Shwe Lin Yone Sayardaw - ရွှေလင်းယုန်ဆရာတော်
- S - Shwe Nya War - Ashin Pinnyasiha - U pyin nyar thiha - ရွှေည၀ါဆရာတော် ဦးပညာသီဟ
- S - Sin Phyu Kyun Sayardaw - ဆင်ဖြူကျွန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဓမ္မသာရ
- S - SuPaung YaHanKhan ShinPyu - စုပေါင်း ရဟန်းခံ၊ရှင်ပြု
- T - Ashin Suriya - Thuriya - အရှင်သူရိယ
- T - Dhammacakkyar dawal Ashin Soma – Thawma - ဓမ္မစင်္ကြာ-ထားဝယ် အရှင်သောမ
- T - Maharsi sayardaw - U Thawbhana - မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန
- T - Metta aye sayardaw Bhaddanta Sujata - Thuzarta - မေတ္တာအေးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုဇာတ
- T - Mogok dhammaransi Bhaddanta Thunanda - မိုးကုတ်ဓမ္မရံသီရိပ်သာဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုနန္ဒ
- T - MyaingGyiNgu Sayardaw - U thuzana - မြိုင်ကြီးငူဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုဇန
- T - Taungtan sayardaw U Uttamasara - တောင်တန်းသာသနာပြု ဦးဥတ္တမသာရ
- T - TharMaNyaTaung sayardaw -U Winara - သာမညတောင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝိနယ
- T - ThaZinYayKyaw Sayardaw Bhaddanta - NyarNawBarTha - သဇင်ရေကျော်ဆရာတော်
- T - Theingu Sayardaw Bhaddanta Ukkahta - U Oak Ka Hta - သဲအင်းဂူဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဥက္ကဋ္ဌ
- T - Theinngu - သဲအင်းဂူ
- T - Thi La Ganda - သီလကဏ္ဍ
- T - Twantay Sayardaw Bhaddanta Indaka - eindaka - တွံတေးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒက
- T - U Sumingala – Thumingala - ဒယ်အိုးဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ
- T - U Thu Ma Na - U SuMaNa - ဦးသုမန (စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆရာတော်)
- W - BhadDanTa Wilartha - ဘဒ္ဒန္တဝိလာသ (ကျောက်လုံးကြီး)
- W - U Wirathu - ဦးဝီရသူ (မစိုးရိမ်)
- W - Waibuu sayardaw - ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး
- W - WarKhinGone sayardaw BhadDanTa Tikkha - ဝါခင်းကုန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတိက္ခ
- Y - Yaw Sayardaw Bhadanta Thiraindarbiwuntha - ယောဆရာတော် (ဘဒ္ဒန္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ)
- Y - YaySaKyo(YaySaGyo) - WarYaMeinDarBhiWunTha - ရေစကြိုဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝါယာမိန္ဒာဘိဝံသ
- Y - YinKyayHmu ThinDan - ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း
- Z - Ashin Zanitarlinkarra - Ashin Agganyarna - အရှင်ဇနိတာလင်္ကာရ
- Z - Ashin Zeyapandita (Moe Nyin Pilot Sayardaw) - အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ (မိုးညှင်းပိုင်းလော့ဆရာတော်)
- Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
- Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ)
- Z - Pyinmanar Maharbawdimyaing - U Zawtika- ပျဉ်းမနား၊ မဟာဗောဓိမြိုင်တောရဆရာတော် ဦးဇောတိက
- Z - U zawtika - Pakkouku - ဦးဇောတိက (ဓမ္မသုခရိပ်သာ ပခုက္ကူမြို့)
Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ
- 550 Buddha Story - ၅၅၀ ဇာတ်နိပါတ်တော်များ
- A - Abhidhamma - အဘိဓမ္မာ
- A - Abhidhamma TeKar - အဘိဓမ္မာဘာသာဋီကာများ
- A - Amazing - အံ.ဖွယ်ထူးခြား ရဟန္တာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ
- A - Ashin Arsaryarlinkarya - အရှင်အာစာရာလင်္ကာရ (စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ)
- A - Aung San SaYarDaw - အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သဒ္ဓမ္မကိတ္တိသာရ
- A - Sayar U Aung Kyi - ပဋိပတ္တိနာယကဆရာဦးအောင်ကြီး
- A - Sayar U Aung Thin - ဆရာဦးအောင်သင်း
-ှQ - Dhamma Questions And Answers - ဓမ္မအမေးအဖြေများ
- B - Artist U Ba Kyi - ပန်းချီ ဦးဘကြည်
- B - Bamaw Sayardaw - ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး - ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ
- B - Bar Thar Char - ဘာသာခြားလေ့လာရေး
- B - Biography - ထေရုပ္ပတ္တိ
- B - Sayardaw U Buhd - ဆရာတော်ဦးဗုဓ်
- D - Ashin Dhammarakkhita - အရှင်ဓမ္မရက္ခိတ
- D - Ashin Dhammassami - အရှင်ဓမ္မဿာမိ (Oxford)
- Dhamma Quiz - ဓမ္မဥာဏ်စမ်း
- G - Sayar U Goenka - ဆရာဦးဂိုအင်ကာ
- General Knowledge - အထွေထွေဗဟုသုတ
- H - U Han Htay - ဦးဟန်ဌေး (သုတေသန)
- H - U Htay Hlaing - ဓမ္မာစရိယဦးဌေးလှိုင်
- K - Ashin KayLarTha - အရှင်ကေလာသ (သာသနာဓဇဓမ္မစရိယ)
- K - Ashin KuThaLaTharMi - အရှင်ကုသလသာမိ
- K - Daw Khin Hla Tin - ဓမ္မဗျူဟာ ဒေါ်ခင်လှတင်
- K - Dr Kawvida - ဒေါက်တာကောဝိဒ (မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်)
- K - Kammawarsa - ကမ္မ၀ါစာ
- K - KyenSar - ကျမ်းစာများ
- K - KyiTheLayHtet SaYarDaw - ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော်
- K - venkawwida venkovida - ဦးကောဝိဒ(မြိတ်)
- L - Lawkaneti - လောကနီတိ
- M - Myanmar Sarpay - မြန်မာစာပေ (ဘာသာစကား)
- M - Maha Buddhawin - မဟာဗုဒ္ဓဝင်
- M - MaHarBawDiMyaing - မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
- M - Mahasi Sayardaw - မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန
-- Maharsi English - မဟာစည် (အင်္ဂလိပ်)
-- Maharsi Myanmar Book - မဟာစည် (မြန်မာ)
- M - ManLal Sayardaw - မန်လည်ဆရာတော်
- M - Maung Htoung Myay Zin SaYarDaw - မောင်းထောင်မြေဇင်းဆရာတော်
- M - Min Yu Wai - ဆရာမင်းယုဝေ
- M - Mingun Sayardaw - မင်းကွန်းဆရာတော်
- M - Mogok Sayardaw - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဝိမလ
- M - U Myint Swe - ဦးမြင့်ဆွေ - မဟာဝိဇ္ဇာ(လန်ဒန်)
- N - Ashin NainDarBiDaZa - အရှင်နိန္ဒာဘိဓဇ
- N - Ashin NiPonNa - ဟိတေသီ နေလ အရှင်နိပုဏ
- N - Ashin NyarNa - ဓမ္မသုခဆရာတော် အရှင်ဉာဏ
- N - Ashin NyarNainDa - ဥက္ကံကြိုချောင်းဆရာတော် အရှင်ဥာဏိန္ဒ
- N - Maung Nyo - မောင်ညို
- N - Nawadutingarsarra Sayardaw - န၀ဓုတင်္ဂါစာရဆရာတော်
- N - Professor Dr.Nandamalabiwuntha - ပါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ
- O - U Oattamatharra တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ
- Others - အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ
-- A - Aung Kyaw - အောင်ကျော်
-- A - Aung Kyaw and Cho Aye - အောင်ကျော် နှင့် ချိုအေး
-- A - U Aye Cho - ဦးအေးချို - မဟာဝိဇ္ဇာ (လန်ဒန်)
-- E - EaindaraSwe - ဣန္ဒာဆွေ
-- H - Dr. Hla Pe - အငြိမ်းစားမြန်မာစာပါမောက္ခ ဒေါက်တာလှဘေ (လန်ဒန်တက္ကသိုလ်)
-- K - U Kan Nyunt - ဦးကံညွန့်
-- K - U Kyaw ZayYa - ဦးကျော်ဇေယျ
-- M - Min Thu Wun - မင်းသုဝဏ်
-- M - U Myint Swe - သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးမြင့်ဆွေ
-- P - Paragu - ပါရဂူ
-- S - Shin Thiri - တက္ကသိုလ်သျှင်သီရိ (ဓမ္မာစရိယ၊ဘီအေ)
-- S - Shwe Done B Aung - ရွှေဒုံးဘီအောင်
-- S - U Shwe Aung - ဦးရွှေအောင်
-- T - Maung Tway Chon - မောင်သွေးချွန်
-- T - U Tun Hla - ဦးထွန်းလှ
-- T - U Tun Nyunt - ဦးထွန်းညွန့်
-- W - Win Thein Oo - ၀င်းသိန်းဦး
-- Z - Maung ZayYar - မောင်ဇေယျာ
- P -3Pitakat - ပိဋကတ်သုံးပုံ
-- A - Abhidhamma Pitaka - အဘိဓမ္မာပိဋက (မြန်မာပြန်)
-- T - Thoattan Pitaka - သုတ္တန်ပိဋက နိကာယ်ငါးရပ် (မြန်မာပြန်)
-- W - WiNee Pitaka - ၀ိနည်းပိဋက (မြန်မာပြန်)
- P - Ashin PyinNyarZawTa - PinNyarJotta - ဓမ္မဒူတအရှင်ပညာဇောတ(တောင်စွန်းမြို့ )
- P - Ashin PyinNyateThara - ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညိဿရ
- P - East Prakkama Sayardaw - စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး အရှေ့ပရက္ကမဆရာတော်
- P - pa yate kyee - ပရိတ်ကြီး
- P - Pahtan - ပဋ္ဌာန်း
- P - Parents - မိဘကျေးဇူး
- P - PaYateKyi - PaYateKyee - ပရိတ်ကြီး
- P - PharAuk TawYa - PaAuk - ဖားအောက်တောရဆရာတော်
- P - PhayarShidKhoe - ဘုရားရှိခိုးအမျိုးမျိုး
- P - Phoe Pyin Nyaw - ဖိုးပညော(သပိတ်ကျင်း)
- P - Professor U Phay Maung Tin - ပါမောက္ခဦးဖေမောင်တင်
- P - U PanTiTa - ရွှေတောင်ကုန်းဆရာတော် ပဏ္ဍိတာရာမ - ဦးပဏ္ဍိတ
- P - U Phay Aung - ဦးဖေအောင် - ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ညွှန်ကြားရေးဝန်
- R - Ashin RarZainDa - YaWaiNwe - အရှင်ရာဇိန္ဒ - ရဝေနွယ် (အင်းမ)
- S - Ashin Ardatesaranthi - U San Lwin - အရှင်အာဒိစ္စရံသီ - ဦးဆန်းလွင်
- S - Ashin Sandardika - အရှင်ဆန္ဒာဓိက (ရွှေပါရမီတောရ)
- S - Ashin SayKeinDa - Cekinda - ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ
- S - Shwe Kyin Sayardaw - ရွှေကျင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
- S - Shwe Ou Min Sayardaw - ရွှေဥမင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
- T - Ashin Thawparka - အရှင်သောပါက (သာသနဓဇမ္မောစရိယ)
- T - Professor Ashin ThiLarNandarbiwuntha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် အရှင်သီလာနန္ဒာဘိဝံသ
- T - ThaPyayKan Sayardaw - သပြေကန်ဆရာတော် အရှင်ဝါသေဋ္ဌာဘိဝံသ
- T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့
- T - Theingu - သဲအင်းဂူ
-- S - Ashin Sandimar - အရှင်စန္ဒိမာ (သဲအင်းဂူ)
- T - Thi Da Gu - သီတဂူ
- T - ThinGarHaKa - Taung Thar - သင်္ဂါဟက - တောင်သာ
- T - U Thu Kha - ဦးသုခ
- T - U ThuMinGaLa - ဥူးသုမင်္ဂလ ဒယ်အိုးဆရာတော်
- W - DhammaBayYee - Ashin Wiriya - Taung Soon - ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း)
- W - WiNee - ဝိနည်းဘာသာဋီကာများ
- W - Winissara - ဝိနိစ္ဆယ - သာသနာရေးဦးစီးဌာန ဝိနိစ္ဆယများ
- W - WiPatThanar - Vipassana - ဝိပဿနာ
- W - Withoatdi Mag - Pure Enlightenment - ဝိသုဒ္ဓိမဂ်
- W - Wunna Thiri - Wanna Thiri - ဝဏ္ဏသီရိ
- W - Wuntharnu - ၀ံသာနု
- Y - Yaw Sayardaw - ယောဆရာတော် - ဘဒ္ဒန္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ
- Z - Ashin Zanakarbiwuntha - အရှင်ဇနကာဘိဝံသ
- Z - Ashin Zawana - အရှင်ဇ၀န - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ)
- Z - U Zanitarlinkarra - ဦးဇနိတာလင်္ကာရ
- Z - ZayYaMayDaNe Sayardaw - ဇေယျမေဒနီဆရာတော်
Dhamma Photos - Dhamma Picture - Dhamma Paint - ဓမ္မဓါတ်ပုံများ
- 360 Degree Photos Panorama - ၃၆၀ ဒီဂရီ ဓာတ်ပုံများ
- A - Proverb and Exhortations - သြဝါဒ ဆောင်ပုဒ်
News - သတင်းများ
Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / Google Earth မဟာဂန္ဓာရံ...
Maha Gandhayon Kyaung -Founded by Magandayon Sayadaw
Tags: Maha Gandhayon Kyang google earth မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက် မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်း မဟာဂန္ဓာရုံ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / O - U Oat Tan Tha - ဆရာတော်ဦးဥက္ကံသ ဆရာတော်ဦ...
Added: 14th August 2011
Posted By: kyaw81
Tags: ဆရာတော်ဦးဥက္ကံသ - အမြတ်ဆုံး သုံးပါးတရားတော်(၄) sayardaw sayartaw UOatTanTha U OatTanTha U Oat Tan Tha Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / O - U Oat Tan Tha - ဆရာတော်ဦးဥက္ကံသ ဆရာတော်ဦ...
Tags: ဆရာတော်ဦးဥက္ကံသ - အမြတ်ဆုံး သုံးပါးတရားတော်(၅) sayardaw sayartaw UOatTanTha U OatTanTha U Oat Tan Tha Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / O - U Oat Tan Tha - ဆရာတော်ဦးဥက္ကံသ ဆရာတော်ဦ...
Tags: ဆရာတော်ဦးဥက္ကံသ - အမြတ်ဆုံး သုံးပါးတရားတော်(၆) sayardaw sayartaw UOatTanTha U OatTanTha U Oat Tan Tha Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / N - Ashin NyarNa - ဓမ္မသုခဆရာတော် အရှင်ဉာဏ ဓမ္မသုခဆရာ...
Posted By: KoTayza
Tags: ဓမ္မသုခဆရာတော် ဓုတင် ဖြစ်ရပ်ဆန်း အရှင်ဥာဏ dhammathukha dhammasukha dhamma thukha sukha sayardaw sayartaw ashin nyarna duutin T - Mogok dhammaransi Bhaddanta Thunanda - မိုးကုတ်ဓမ္မရံသီရိပ်သာဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုနန္ဒ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဗုဒ္ဓဘာသာ...
Posted By: yeyint
ဗုဒ္ဓဘာသာ ၅မျိုး နှင့် သစ္စာတရား တရားတော်
Tags: အရှင်သုနန္ဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၅မျိုး နှင့် သစ္စာတရား မိုးကုတ် မိုးကုတ်ဝိပသနာ မိုးကုတ်ဆရာတော် mogok dhammaransi sayardaw sayrtaw bhaddanta thunanda U thunanda sunanda buddhism buddhist buddha5kinds of buddhist P - Pagoda - SayDePaHtoeMyar - CeTiPaHtoeMyar - စေတီပုထိုးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဆံတော်ရှင...
Added: 14th August 2010
Tags: ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုး - kyitehteyoe kyitehteeyoe sandawshin santawshin T - Maharsi sayardaw - U Thawbhana - မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ကျေးဇူး၇ှ...
Added: 17th August 2010
Tags: မဟာစည် - maharsi sayartaw maharsi sayardaw maharse mahasi mahase uthawbhana u_thawbhana usobhana u_sobhana usawbhana u_sawbhana M - Munle (Monlae) Tawya - မုံလယ်တောရဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသံဝရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အ၀ိဇ္ဖာဦး...
မုံလယ်တောရဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တသံဝရ
Tags: မုံလယ်ဆရာတော် - monelaltawya sayartaw monelaltawya sayardaw monlae munle tawya M - Munle (Monlae) Tawya - မုံလယ်တောရဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသံဝရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အိုးကွဲပန...
မုံလယ်တောရဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တသံဝရ
Tags: မုံလယ်ဆရာတော် , မုံလယ်တောရဆရာတော် , မုံလယ် , monelaltawya sayartaw monelaltawya sayardaw monlae munle tawya monlal sayardaw monlalsayardaw Pages: 1234567 of 67